FAALLO: Xukuumadii Dhuuni-Raac Ama Xukuumadii La-Dheefsado Dhankeeba La Saadaalin inay Dawlada Muuse Biixi Ku Danbayso.
“Si Ay Noqon Alle-Og LKN Ifafaalaheedu Waa Muuqdaa Dhankay Ujanjeedho Xukuumadan Curdin- Dhadhey”
Waxay jirtaa mudo ku siman 8bilood iyo maalmo, waxqabadkedu waa yar yahay, balse amaradeedu waa badan yihiin, sidoo kalena Xaalada nabadgelyo ee Dalku maanta maaha Sidii xaalku ahaa markii ay Dalka la wareegtay.
Mudadii koobnayd ee ay shaqaynaysay Xukuumada uu gadhwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi si weyn ayay usaluugeen bulsho badan oo reer Somaliland ahi qaabka ay ushaqeynayso, waxaana ay qaaday xukuumadu talaabooyin ubadan sidii ay uheli lahayd dhaqaale badan oo kusoo xarooda khasnada Dawlada. Ilo-badan oo dhaqaale oo kujiray gacanta shirkado gaar loo leeyahay ayay xukuumadu kusoo celisay gacanta dawlada,
Xukuumada cusubi iyadoo dhuuniga dhaqaluhu shaqaynayo waxay kordhisay dhamaan ilaha cashuuraha ee dawlada usoo xaroonjiray ee ay kamid tahay badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dekada oo lagu kordhiyay cashuurta (40%), waxay kaloo xukuumadu kordhisay dhamaan ilaha cashuureed ee kusoo xaroon jiray khasnada Dawlada.
Waxa ugu danbeeyay ee xukuumadani iyadoo ku raadjoogta dhaqaale-raadis ay joojisay dhamaan cashuurdhaafkii loo samayn jiray warshadaha iyo shirkadaha dalka gudihiisa wax kusoo saara.
Kuma koobna kaliya digreetooyinka madaxweyne muuse biixi ee dhaqaaluhu intaasi ee waxa sii raaca in ,Madaxweynuhu ku adkeeyay wasaarada maaliyadu inay soo xarayso dhaqaale kabadan kii ay hore usoo xeryn jirtay.
Taas bedelkeeda waxa siweyn Dalka usaameeyey Dhaqaale yaraan taas oo ay bulshadu isku raacday inay sababtay xukuumada cusubi oo ay ubixiyeen “Dawlada Muuse-Handaraab”
Wey fiican tahay inay xukuumadu hesho dhaqaale badan si ay waxbadan uqabato balse ilaa hada ma jiro waxqabad ay bilowday xukuumadu marka laga reebo balanqaad afka baarkiisa ah.
Hadaba waxa isweydiin mudan bulshaduna ka faaloonaysaa halka uu mari doono dhaqaalahani sida xad dhaafka ah xukuumadu uraadjoogto, dad badan ayaa aaminsan in madaxweyne Muuse Biixi uu lasoo baxay wajigisii dhabta oo uu bilaabay salaankii uu ku noqon lahaa Taajir Soomaliyeed. Halka kuwo kalena aamin sanyihiin inaanu muuse biixi iska bedelayn qorshayaashii uu ku ololeyn jiray oo ugu horeeyaan inuu dalku yeesho waxsoosaar baaxad leh, taas oo uu dhaqaalaha gelin doono.
Si Kastaba ha ahaatee Digreetooyinka isdaba jooga ah uu soo saaray Madaxweyne Muuse Biixi oo ay ku lamaan yihiin go,aamo cashuur kordhin ah oo uu soo rogay Gacanyarihiisa(wasiirka wasarada Maaliyada) ee ku wajahan dhaqaale-raadiska ayaa saamayn aan la mahadin ku yeelanaya bulshada waxaana aan la qarin Karin waxkasta oo xukuumadu cashuurta ku kordhisay inay ka go,an tahay bulshada oo ganacsatado ay ku kordhinayso.
Bulshada somalilanderka ah ayaa siweyn uga walaacsan qaabka ay dawladu uraadinayso dhaqaalaha oo sababi kara sixir barar labanlaabma iyo isku dhac sadex geesood uu dhexeeya ganacsatada, dawlada iyo shicibka danyarta.
Si kastaba xaalku ha ahaadee xukuumadii hore ee madaxweyne Siilaanyo ayaa dhaqaalaheeda ubadan ka raadin jirtay debada iyo maalgashiyo halka ay xukuumada cusub ee muuse biixina ay dhaqaaleheda ka dhexbaadhayso shacabka ku nool gudaha Somaliland,
siday noqon Alle-Og laakiin xaalka xukuumadani curdin-dhadhey ayaa ku danbayndoonaa inay noqoto xukuumadka baxda Handaraabka ay hadeer ku jirto oo la dheefsado dhaqaalaheeda ama waxa xaalkeedu ku danbayn sida ay hadeer ifafaaleedu muuqda inay noqoto xukuumad ooman oo dhaqaale urursi iyo dano gaara lagu fushado laguna tunto shacabka danyarta ah.
Qore: Xabiib Cigge Xassan